China Ukhuseleko lwempahla AM 58KHz Iimpawu zeAlarm Sensors-Mini Ipensile yomenzi weegi kunye nabathengisi | Etagtron
AM Ipensile Hard Tag Clothing Ukhuseleko Alarm woluvo
Ukunciphisa ukuthengisa okulahlekileyo kunye nokususa iindleko zomsebenzi ezinxulunyaniswa nokumakishwa kwivenkile, ukuvumela abahlobo bevenkile ukuba basebenze ngcono kubathengi
Ithegi yeenjongo ezininzi ikhusela iimpahla ezilukhuni, izinto ezithambileyo kunye nayo yonke into ephakathi
Isicelo esilula kunye nokususwa ukunceda ukuphucula ukusebenza kwevenkile
Ngama-45 * 19 * 14MM
I-0.5-2.5m (ixhomekeke kwiNkqubo kunye nokuzonwabisa kwindawo)
Uyilo lwepensile enkulu kakhulu eyi-1.
I-2.Super-Lock Security Tag inokufakwa kwizambatho ezahlukeneyo, ukunciphisa ifuthe nakwizona mpahla ziethe-ethe.
Uyilo olunganyangekiyo lwe-3. Indlu yeplastiki engqongqo ye-ABS idityaniswe nenqaku lokutshixeka kakhulu kuthetha ukuba kuphela uhlobo oluchanekileyo lokwenza izinto luya kuvula le thegi.
4.Le thegi yokuthengisa yeyona nto ithengisayo. Ilula, inobulumko kwaye isebenza ngokugqibeleleyo. Ithegi eyahlukileyo yeMouse idibanisa ithegi yokhuselo lwepensile kunye ne-lanyard kwimveliso enye eluncedo kakhulu. Perfect zonke iintlobo isicelo, kuquka izihlangu kunye neebhegi.
5.Ithegi yepensile iyakhawuleza kwaye kulula ukuyisebenzisa. Iyafumaneka kuwo nawuphi na umnyango wokungena / wokuphuma kwenkqubo yokhuseleko kunye nazo zonke ii-EAS.
♦Ithegi enzima yokulwa ubusela inomsebenzi ozinzileyo wealam, inokuthi iqhotyoshelwe ngamandla kwimveliso, kwaye inobomi benkonzo ende. Iimpawu ezomeleleyo zihlala ixesha elide kwaye zinokuphinda zisebenze ukuze zisetyenziswe kwakhona. Zisetyenziswa ikakhulu kwiimeko ezahlukeneyo ezinjengeevenkile ezinkulu, iivenkile zempahla, iivenkile zezixhobo, njl.njl. Zingasetyenziselwa ukupakisha okungamanzi kunye nentsimbi, ukunciphisa ngempumelelo ilahleko zobusela, ukwandisa inzuzo kwivenkile, kunye nokuphucula amava okuthenga.
♦Ithegi yePensile encinci yokulwa nobusela yinto elungileyo phakathi kwePensile kunye nePensile Super ukukhusela izinto ezisukela kwimpahla enzima ukuya kwimpahla eethe-ethe. Ifaka uyilo lwala maxesha, oloyisayo kunye nokusetyenziswa ngokulula / ukususwa kwindawo yentengiso, le thegi isebenza kunye ne-Etagtron kunye nazo zonke ezinye iinkqubo ze-AM 58Khz, ithegi ye-Elektroniki yoPhononongo lweNqaku (i-EAS) ilungele ukukhusela iintlobo ezahlukeneyo zentengiso ukunqanda ubusela ezivenkileni. Yenzelwe zonke iinkqubo ze-AM 58KHz.
Egqithileyo Ilebheli yoKhuseleko lweLebhu ye-Deactivator ye-AM 58Khz EA EA AM Label-CT580
Ukhuseleko lwempahla AM 58KHz Iimpawu zeAlarm sensors H ...